सुन तोलाको ९०० ले घट्यो, प्रतितोला ७२ हजार ६०० रुपैयाँ | Radio Nepal | रेडियो नेपाल
सुन तोलाको ९०० ले घट्यो, प्रतितोला ७२ हजार ६०० रुपैयाँ
रासस २०७६ भदौ १० गते १२:३५
काठमाडौँ। पछिल्लो डेढ महीनादेखि निकै उतार चढावका बीच कारोवार हुँदै आएको सुनको मूल्यमा स्थानीय बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार, मंगलबारछापावाल सुनको मूल्यमा रु. ९०० ले गिरावट आई प्रतितोला रु. ७२ हजार ६०० कायम भएको छ । सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला ७३ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोवार भएको थियो । सो मूल्य नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला रु. ९०० का दरले घटेको छ । तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु. ७२ हजार ३०० कायम भएको छ । सोमबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु. ७३ हजार २०० पुगेको थियो । सुनको मूल्य केही घटेपनि चाँदीको मूल्य भने यथावत रहेको छ । स्थानीय बजारमा चाँदी प्रतितोला रु. ८६० मा कारोवार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
गत साउनको शुरुआतदेखि नै सुनको मूल्य तीव्र गतिमा उकालो लाग्न थालेको हो । साउन महीनामा सुनको मूल्य प्रतितोला रु. सात हजार र चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु. ९५ ले वृद्धि भएको थियो । भदौ महीना लागेपछि पनि लगातार सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भइरहेको छ । भदौमा छापावला र तेजाबी सुन प्रतितोला रु. दुई हजार ५०० ले वृद्धि भएको छ । तीव्र वृद्धिका बीचमा सुनको मूल्य आज प्रतितोला रु. ९०० ले घटेको हो ।
साउन १ गते छापावाला सुन प्रतितोला रु. ६४ हजार ५००, तेजाबी सुन रु. ६४ हजार २०० र चाँदी प्रतितोला रु ७४५ कारोवार भएको थियो । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्य बढ्ने क्रम रोकिएको छैन् । विश्व बजारमा आज सुनको मूल्य सोमबारको तुलनामा केही घटेको छ । मङ्गलबार सुनको मूल्य प्रतिऔँस एक हजार ५३०।३५ अमेरिकी डलर कायम भएको छ । सोमबार सुनको मूल्य प्रतिऔँस एक हजार ५३२।७५ अमेरिकी डलर पुगेको थियो ।